घर अमेरिकी स्टेर्स फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम संग ज्ञात "Fede“। हाम्रो फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
फेडरिको भल्भर्डेको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: Elobserver र दैनिकमेल
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक हो सर्वोच्च प्रतिभाशाली मिडफिल्डर, एक नायक जसले केवल रियल मैड्रिड प्रशंसकहरूको हृदय जितेका छैनन्। यद्यपि, केवल थोरै प्रशंसकहरूले फेडरिको भल्भर्डेको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छन् जुन धेरै चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
फेडेरिको स्यान्टियागो भल्भर्डे डिपेटा जुलाई 22 को 1998nd दिन उसको बुबा जुलियो भाल्भर्डे र आमा डोरिस भल्भर्डेको जन्म मोर्तेभिडियो, उरुग्वेमा भएको थियो। फेद, उहाँ अक्सर भनिन्छ, तल चित्रमा उसका प्यारा आमा बुबा को दोस्रो बच्चाको रूपमा जन्म भएको थियो।
फेडरिको भल्भर्डेका अभिभावकलाई भेट्नुहोस् - उनका बुवा, जूलियो र आमा, डोरिस। छवि क्रेडिट: ovaciondigital
फेडेरिको एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् र धर्मको आधारमा, उनी धार्मिक आमाबाबुद्वारा हुर्केका थिए जो भक्त रोमन क्याथोलिकहरू हुन्। जस्तै डिएगो फोर्लेन, फुटबलरको उरुग्वे राजधानी शहर मोन्टेभिडियोबाट उसको परिवारको उत्पत्ति छ। उरुग्वेको राजधानी शहर (मोन्टेभिडियो) कुनै समय पूर्व स्पेनी साम्राज्य हो भन्ने तथ्यको कारणले (1724-1807), हामी भन्न सक्दछौं कि फेडेरिकोको स्पेनी परिवारको जरा हुन सक्छ।
फेडरिको भल्भर्डेको पारिवारिक उत्पत्ति मोन्टेभिडियो शहरबाट आएको हो। क्रेडिट: theculttrip र elobservador
फेडेरिको भाल्भर्डे केवल उनका आमा बुबाको छेउमा एक्लो हुर्किएन, तर उनको जेठो दाइसँग जो डिएगो नामबाट जान्छन्। यो एउटा परिवार थियो जुन सुरुमा फुटबलको बारेमा केही थाहा थिएन, परिवारका सदस्यहरू वा आफन्तहरू सम्बन्धित थिएनन्। खेल हाम्रो आफ्नै फेडेरिको भल्भर्डेसँग शुरू भयो जबसम्म ऊ डायपर लगाएको थियो।
सबै भन्दा पछि जन्मेका बच्चाहरु जस्तै, फ्रेडेरिको एक प्रकारको बच्चा थियो जसले केहि माग्ने थियो र आफ्नो औंलाहरु को तस्वीर संग यो गरिरहेको थियो। त्यस पछि, उनले कहिल्यै खेलौना भनेनन्, तर केवल एक फुटबल। बच्चाको रूपमा (2 वर्षको उमेर), फेडेरिकोले आफ्नो बुवाको नेललाई आफ्नो परिवारको बैठक कोठामा गोल पोस्ट बनाए। दिनभरि बाहिर, उसले घण्टा को लागी जाल मा बल लात, घरेलू गोल स्कोर। उसलाई थोरै नै थाहा थियो कि यो उसको भाग्यको संकेत हो।
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
एक्सएनयूएमएक्सको उमेरमा, फेडरलले उसलाई खेल शिक्षाको खोजीमा फुटबल टीममा सामेल हुने तीव्र इच्छा थियो। ऊ अझै डायपर लगाएको बेला, उसका आमा बुबाले उनलाई सफलतापूर्वक भर्ना गराए युनियन विद्यार्थीका बच्चाहरू, मोन्टेभिडियो शहर मा एक सानो अकादमी। यद्यपि उसलाई आधिकारिक खेलहरू खेल्न अनुमति दिइएन किनभने उहाँ6को उमेरसम्म हुनुहुन्न।
तीन बर्षको उमेरमा, एक अनौपचारिक खेलमा, फेडले पहिलो गोल गोल दानुबको अर्को एकेडेमीको बिरूद्ध अनधिकृत खेलमा भयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उत्सवमा, सानो फुटबलर फ्यानहरूको चकित गर्न उसको डायपर झिक्यो। आधिकारिक खेलहरूको अभावको लागि क्षतिपूर्तिमा, सानो फेडरिको कहिलेकाँही ठूलो टोलीमा मस्कटको रूपमा खडा गरियो।
सानो फेडरिको भल्भर्डे आफ्नो शुरुआती दिनमा एक मस्कटको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
बिस्तारै, फेडेरिको हुर्कियो र जब उनी एक्सएनयूएमएक्सको उमेर पुगे, एकेडेमीले उनीहरूको विशालताका साथ उनलाई 5- बर्ष उमेर र माथि उमेरका लागि एकेडेमी सेटअपमा खेल्ने अवसर दिने निर्णय गरे।
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
फुटबलर बन्नको लागि उनीहरूको केटाको चाहना बुझेर फेडरिको भल्भर्डेका आमा बुबाआमाले उनको चाहनालाई पूरा गर्न सक्ने सबै गरिरहेछन्। त्यसबेला उहाँ सामिल हुनुभयो, त्यहाँ आफ्ना साना खुट्टाका लागि कुनै फुटबल जुत्ता थिएन। फेडरिको भल्भर्डेकी आमाले धेरै पसलहरूको भ्रमण गर्नुपर्‍यो, अन्त्यमा, मेलामा प्रयोग हुनेहरू फेला पार्नुभयो।
धन्यबाद, प्रयास फुटबल खेल को उनको पहिलो केहि महिना भित्र सानो चाप को लागी भुक्तान गर्न थाले (आफ्नो 6th जन्मदिन अघि). तपाईंलाई थाँहा थियो?… फेडरिको भल्भर्डेले आफ्नो टीमलाई 2003 वर्षमा पहिलो च्याम्पियनशिप ट्रफी जित्न मद्दत गर्‍यो भने अझै5बृद्धि भएको छ।
फेडरिको भल्भर्डे फुटबलमा प्रारम्भिक वर्ष- उनको पहिलो ट्रफी। छवि क्रेडिट: Elobserver
उसको भन्दा पुरानो खेलाडीहरू विरूद्ध पनी जित्यो र जित्नको लागि गइरहेको छ एक्सएनयूएमएक्सको टेन्डर उमेरमा उनको पहिलो च्याम्पियनशिपले ठूला प्रतिष्ठानहरूमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढायो।
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सडकको प्रसिद्धि कथा
वर्ष 2008 मा, भल्भर्डे परिवारको आनन्दको कुनै सीमा थिएन जब सानो फेडरिकोलाई मोन्टेभिडियोका अर्को उरुग्वे स्पोर्ट्स क्लब पेनारोलसँग ट्रायलमा भाग लिन बोलाइएको थियो। उहाँ परीक्षणको लागि आफ्नो आमा सँगसँगै जानुभयो।
बच्चाहरू भेला हुने सत्रमा पुगे पछि लजालु केटाले रूखको बिरूद्ध झुकाव राख्यो र सर्न सकेन। नेस्टोर गोन्साल्भेस नामले टेस्ट गर्ने खेलाडीहरू छनौट गर्ने जिम्मा लिने कोचिंग स्टाफमध्ये एक जनाले फेडरिकोलाई भने; “ओइ केटा! तिमी किन खेल्न आउँदैनौ? खेल्नु!“। फेडरिको (नौ वर्षको उमेर) ले तुरुन्त आधिकारिक आवाजमा प्रतिक्रिया देखायो। ऊ चाँडै नै आफैंको परीक्षणको लागि अरू बच्चाहरूको साथ दगुरे।
डोरिस, उसको आमाले अभ्यास देख्यो र कोच सुन्न सक्‍यो कि उनको छोरो एक दुर्लभ बच्चा हो जसले निश्चित रूपमा स्वीकार्य हुनेछ। यो सुनेर, घमण्डी आमाले नेस्टोर गोनाल्भेसको भनाइमा हिंडे; 'तपाईं को बारे मा कुरा गर्नुभयो फेड मेरो छोरा हो'। तुरुन्तै, कोचले डोरिनलाई उनलाई राम्रो गरी हुल्याएकोमा धन्यवाद दिए। सफल परीक्षण पछि, Federico चित्रित तल दर्ता पेआरोल।
पेडरोलको साथ सफल परीक्षण पछि फेडरिको भल्भर्डेको छवि। छवि क्रेडिट: Elobserver
सामेल हुँदै पेआरोलले उनलाई छिटो प्रगति गर्न मद्दत गरे र किशोरावस्थामा उनलाई राष्ट्रिय मान्यता दिए। भित्र उनीहरूसँग सामेल भएको दुई बर्ष, उदाउँदो ताराले उरुग्वे यूएक्सएनयूएमएक्स राष्ट्रिय युवा टीमको कल भयो।
2015 – 2016 seasonतुमा अझै पेआरोल एकेडेमीमा हुँदा फेडरले आफ्नो नायकलाई भेटे डिएगो फोरलन जुन जुलाई 10 को 2015th मा क्लबको वरिष्ठ टीममा सामेल भयो। उरुग्वेयन लीजेन्ड जो रिटायरमेन्टको नजीक आएको थियो उनको बुबाको रुपमा सेवा गरे।
फेडरिको भल्भर्डेको आइडल-डिएगो फोर्लेनलाई भेट्नुहोस्। यहाँ, यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले केवल एक सल्लाह सत्रमा निष्कर्ष निकाले। छवि क्रेडिट: ब्रान्ड
डिएगो फोर्लेन आफ्नो युवा क्यारियर मा फेडर सबैभन्दा सल्लाह दिए, उहाँलाई कडा परिश्रम र विनम्रता बताउन। चाँडै, एक बढ्दो फेडेरिको एकेडेमीबाट स्नातक भए र क्लबको वरिष्ठ टोलीमा आफ्नो मूर्तिमा सामेल भए। मन्टरोरिंगले फेडरिको भल्भर्डेलाई मात्र सफलता दिइन। यो सफलता थियो जुन उहाँबाट बाहिर निकालिए किनकि उहाँसँगै उनीहरूको मूर्ति (डिएगो फोरलन) सँगै ट्याग गरिएको थियो र पेयरोललाई प्राइम्रा डिभिजन एक्सएनयूएमएक्स-एक्सएनयूएमएक्स ट्राफी सुरक्षित गर्न मद्दत गर्‍यो।
फेडरिको भल्भर्डे आफ्नो शिक्षक र मूर्तिसँग मिलेर पेनरोललाई 2015 – 16 Primera División शीर्षकमा निर्देशित गरे। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम, Bolavip।
फेडेरिको 17 थियो, उनको मूर्ति (Forlan) उसले अर्को क्लबको लागि छोडिदियो, एक विकास जसले उसलाई शान्त महसुस गरायो। यद्यपि, व्यक्तिगत प्रिमियर डिभिजनको जीतले उनलाई युरोपियन क्लबहरूको होस्टद्वारा मोनिटर गरेको देख्यो। यो वास्तविक मैड्रिड हो जसले सफलतापूर्वक आफ्नो हस्ताक्षर सुरक्षित गर्‍यो। क्लबले उनलाई आफ्नो युवा टीम (रियल म्याड्रिड बी) मा खेल्न अनुमति दियो जहाँ उनी प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ टीममा स्थानका लागि लडे।
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
रियल म्याड्रिड बीमा हुँदा फेडरिकोलाई फिफा यू-एक्सएनयूएमएक्स विश्वकपमा उनको देशको प्रतिनिधित्व गर्न बोलाइएको थियो। टूर्नामेन्टमा उरुग्वेको यात्रा ठोस प्रतिरक्षा र फेडेरिको भल्भर्डेबाहेक अन्य व्यक्तिले नेतृत्व गरेको अचम्म मिडफील्डले राम्रोसँग परिभाषित गरेको थियो।
प्रतियोगिता पछि, भल्भर्डे प्रतियोगिताको सिल्वर बल जित्यो। तल चित्रित उहाँसँगै छ डोमिनिक सोलंका र क्रमशः एडिडास गोल्डन र सिल्वर बलका विजेता यान्जेल हेरेरा।
फेडरिको भल्भर्डेले एडिडास रजत बललाई फिफा U-20 वर्ल्ड कप 2017 मा जित्यो। छवि क्रेडिट: फिफा
टुर्नामेन्टको पछाडि चर्को भन्दा पनि मिडफिल्डर रियल मैड्रिडका वरिष्ठ टोलीमा छिर्दै बलबाट अर्को सामर्थ्यमा पुगे। रियाल म्याड्रिड मिडफील्ड भूमिकाको वास्तविक दावेदार बन्नको लागि, उनले अर्कै ठाउँमा अनुभव लिने निर्णय गरे, loanण विकल्प लिएर डेपोर्टिभो ला कोरुआ, क्लबले उनलाई परिपक्व बनायो।
एफसी बार्सिलोना बिरूद्ध डेपोर्टिभोको एक खेलमा, फेडले यति राम्रो खेलेको हो, एउटा उपलब्धि छ Luis Suarez उसलाई अभिवादन गर्न र उनको शर्ट लगाउन ला Coruña ड्रेसिंग कोठामा तल दगुर्दै।
Fromण बाट फर्कनुहोस्: Fromणबाट फर्किएपछि, भाल्भर्डेले 2018 / 2019 पूर्व-सिजनको समयमा आफ्नो तत्कालीन नयाँ मालिक जुलेन लोपेटेगुइलाई प्रभावित गर्न शुरू गरे। उसको प्रदर्शनले उनलाई रियल म्याड्रिड पहिलो टीममा पुन: स्थान पाइरहेको देख्यो। Lopetegui पछि, अर्को व्यवस्थापक स्यान्टियागो सोलोरी भल्भर्डेको बढ्दो महत्त्व र टोलीको लागि अनुकूलनतामा पनि प्रभावित भयो। लेख्ने समयको अगाडि छिटो, फेडेरिकोले रियल म्याड्रिडसँग यथेष्ट रूपमा रूपान्तरण गरेको छ, 2019 2020 throughoutतुमा उफ्रेर र सीमानामा सुधार गर्दै।
फेडरिको भल्भर्डे अब माद्रिदको साथ आफ्नो मिडफील्डको भूमिकामा उच्च र शक्तिशाली बनेका छन्। क्रेडिट: 90Min
हो!, हामी फुटबल प्रशंसकहरू उदाउँदो तारा हाम्रो भविष्यका सर्वश्रेष्ठ मिडफिल्डरको अगाडि फ्लोसिंगको दृश्यमा उभिएको छ र हाम्रो आँखाको अगाडि। फेडरिको भल्भर्डे वास्तवमा एक हो, विश्व फुटबलमा अचम्मको मिडफिल्डर्सको अन्तहीन उत्पादन लाइन बीच। उहाँ केवल काँधमा मलल्न तयार हुनुहुन्न लुका मोररिक र टोनी कोरोस तर यी ग्रेटहरू कसैलाई पनि हटाउन एक ठूलो प्रतियोगी। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सम्बन्ध जीवन
प्रत्येक सफल फुटबलरको पछाडि, त्यहाँ सँधै सम्भावित डब्ल्यूएजी हुन्छ जसले उनको आँखा घुमाउँदछ र प्रेमिकाको रूपमा उनको स्थान सिमेन्ट गर्न चाहन्छ। संघको यस मामलामा, त्यहाँ एक ग्लैमरस महिला थिई जो नाम लिएर जान्छे; Mina Bonino। उनी (तल चित्र) फेडरिकोले उनको पूर्व प्रेमिका जूलियट छोडे पछि उनको प्रेमिका बसी।
फेडरिको भल्भर्डेको प्रेमिका - मिना बोनिनोलाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
सौन्दर्य र मस्तिष्कको संयोजन विनम्र फुटबलरहरूको गर्लफ्रेंडको बीच धेरै सामान्य हुन्छ। फेडेरिकोको त्यस्तो अपवाद छैन किनकि उनकी प्रेमिका एक सफल टिभी प्रस्तुतकर्ता र पत्रकार हो। मीना Bonino अक्टुबर 14 को 1993th दिनमा जन्म भएको थियो मतलब उहाँ आफ्नो प्रसिद्ध प्रेमी भन्दा5वर्ष पुरानो छ। वास्तवमा कसले ख्याल राख्दछ ...… आखिर, उमेर, तिनीहरू भन्छन्, मात्र एक संख्या हो।
मीना Bonino इन्स्टाग्राममा एक विशाल फ्यानबेसको मजा लिन्छन् उनको इंस्टाग्राम पृष्ठमा 250k अनुयायीहरू (लेख्ने समयमा)। को सुन्दर श्यामला उनीहरुको तस्वीरमा हरेकको साथ आत्मविश्वास आउँछ। तल देखाइएको अनुसार दुबै स्वस्थ सम्बन्धको आनन्द लिन्छन् जुन केवल मित्रतामा निर्मित छ।
फेडरिको भल्भर्डे र उनकी प्रेमिका दोस्तीमा निर्मित ठोस सम्बन्धको आनन्द लिन्छन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
तिनीहरूको उमेरको भिन्नतालाई दुबै दुबै प्रेमीहरूले आफूलाई केवल साझेदार वा प्रेमीहरू भन्दा बढी देख्दछन् - तर सबै भन्दा राम्रो साथीहरु। तिनीहरू एक अर्काको र गहिरोसँग गहिरो हेरचाह गर्छन्, ईर्ष्यालु प्रेमीहरू हुन्। यो ईर्ष्याले कहिलेकाँही ती दुई बिचमा हल्का मनको युद्ध ल्याउन सक्छ। पर्याप्त कुराकानी !!... .. अब तपाईं सारांश दिनुहोस्!
अनुसार सूर्य, भेलभर्डेले एक पटक उनको प्रेमिकासँग शब्दहरूको हल्का मनलाग्दो युद्ध शुरू गरे पछि उनले उनलाई एक अनुहारमा सेल्फी अपलोड गरेको देखे जुन उनको इन्स्टाग्राममा धेरै संवेदनशील शरीरका भागहरू पत्ता लगाउँछिन्। पोष्टमा उनको टिप्पणीले केहि मिनेटमा जनताबाट सयौं लाईक अप प्राप्त गर्‍यो।
Federico र उसकी प्रेमिका मिना Bonino बीच एक हल्का युद्धको कारण फोटो। छवि क्रेडिट: सूर्य
तपाईंलाई थाँहा थियो?… तब 20- वर्ष पुरानो उनको प्रेमिका राति निदाए पनि उनको माथिबाट नलिनको बारेमा मजाक गरे। संकेत त्यो सबै दिन यो लगाउँदछ। मीना बोनिनोले उनको बर्बर बदला लिइन जब उनी उरुग्वे प्रेमीले नियमित रूपमा गर्दिन भन्छिन्। उसको पोशाक धुनुहोस्। उनको शब्दहरूमा;
"हो, म उही टी-शर्ट पाउन चाहान्छु तर तपाईले जस्तै एक हप्ताको लागि समान प्यान्ट्स लगाउँदिन।"
दुबै प्रेमीहरु प्रशंसकहरु लाई चिन्तित भयो उनीहरूको सम्बन्धको अवस्थाको बारेमा उनीहरूको हलुका हृदय शब्दहरूको आदानप्रदान पछि। धन्यबाद, केहि दिन पछि, फेडरलकी प्रेमिका बोनिनो प्रशंसकहरु लाई प्रमाणित गरे कि उनीहरु बिच कुनै गाह्रो भावनाहरु थिएनन्। यो देखीएको थियो जब उनले आफैंको तस्वीर एक आपसमा गहिरो प्रेम को बारे मा एक मिठाई क्याप्शन संग।
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - व्यक्तिगत जीवन
फेडरिको वाल्भर्डे व्यक्तिगत जीवनलाई टाढाबाट चिन्नुले तपाईंलाई पिचबाट टाढाको व्यक्तित्वको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवातबाट, ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले स्वतन्त्रताको आन्तरिक अवस्था पाउँदछ जुन उसको व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्दछ। फेडेरिकोसँग कहिलेकाँही एक्लो समय र सबै कुराबाट टाढा गहन आवश्यकता पर्दछ। ऊ बस्न रुचाउँछ धेरै जसो समुद्र किनारमा क्रममा क्यारियरको तनावबाट आफूलाई बहाल गर्न।
फेडरिको भल्भर्डेको व्यक्तिगत जीवनलाई फुटबल गतिविधिहरूबाट टाढा राखेर। क्रेडिट: आईजी
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि, फेद कोमल हृदयले यस्तो छ, जो पिच बाहिर बाहिर संघर्ष गर्नबाट जोगिन सबै आवश्यक गर्दछ। जहाँसम्म उसको कोमल हृदयको सवालको सवाल छ, फेडरलले उनको भन्दा5वर्ष जेठो प्रेमिकाको छनौट जायज छ। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले अस्थिर वा अविश्वसनीय साझेदारहरूलाई मन नपराउँछ र परिपक्व महिलाको साथ हुन चाहन्छ जो आफ्नो कडा दैनिक दिनचर्या फुटबलरको रूपमा बुझ्दछ।
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - पारिवारिक जीवन
उसको घरमा राखिएको गोल पोष्ट अब ऐतिहासिक छ। फेड जो अब एक मान्छे हो यो एक स्मारिकाको रूपमा यसलाई खेलको साथ आफ्नो प्रारम्भिक जीवन अनुभव सम्झना राखिएको छ। आज, यो सबै उसको परिवारको घरमा उसको व्यक्तिगत र क्लब सम्मानहरू जम्मा गर्ने बारेमा हो।
फेडरिको भल्भर्डेले आफ्नो परिवार र उसको परिवारको घरमा स in्ग्रहित हिउउन्ससँगै चित्रण गरे। क्रेडिट: ब्रान्ड
फेडरिको भल्भर्डेको बुबामा अधिक: त्यतिखेर, जूलियो उनका बुबा जहिले पनि काममा थिए जबकि उनकी श्रीमतीले उनीहरूको छोराको क्यारियर हेरचाह गरे। आज, सुपर बुबालाई गर्व छ कि उसको छोरो एक मान्छे भएको छ र लामो समयदेखि तालिम लिने युवायुवती नै रहेको छ। उसको शब्दमा; “सानो पक्षी ठूलो बर्ड बन्न पुगेको छ, जब एक जब विरोधीले त्यसलाई हिर्काउँछ, सजिलै माथि उठ्छ र जारी रहन्छ"। यद्यपि उनकी श्रीमती जस्तो उसको क्यारियरमा त्यति प्रभावकारी छैन, जुलियो (तल चित्रमा) फुटबल प्रेम गर्ने बुबा हुन् जसले आफ्नो छोराको साथ फुटबलको बारेमा कुरा गर्न मन पराउँछन्।
भाल्भर्डेसँग उसका बाबु-खुशी उनका बुबा, जूलियो र आमा, डोरिससँग खुशी छन्। क्रेडिट: ovaciondigital
फेडरिको वाल्भर्डेको मममा थप: फेडेरिको युरोप यात्राको क्रममा, उनको आमाले उनको आमाको भूमिकालाई सशक्त बनाउनु भयो कि उहाँ र उनका पति जूलियो दुबै म्याड्रिडको पछि लागेका थिए। ती सबै म्याड्रिडमा बस्थे र उनले यस कुराको सुनिश्चितता गरिन् कि फेडले उनको सुन्दर भान्साको आनन्द लिन जारी राख्नुभयो।
डोरिससँग म्याड्रिडमा रहँदा एउटा अद्भुत अनुभव थियो। तपाईं उनी सायद बर्नबाउ जानुहुन्छ, बरु उसको छोरालाई टेलिभिजनमार्फत हेर्न रुचाउनुहुन्छ। जब उनी सुपरमार्केट वा शपिंग मल्लमा जान्छन्, यो फरक अनुभव थियो। डोरिस बजारमा हुँदा मानिसहरूले उनको छोराको बारेमा टिप्पणी गर्ने सुन्न्थे। उनले बोल्ने बित्तिकै मानिसहरू उनी कहाँबाट आए भनेर जान्न चाहन्थे किनकि उसको स्वर फरक थियो। तुरुन्तै उनी जवाफ दिन्छिन् कि ऊ उरुग्वेयन हो, अर्को प्रश्न हुन्छ;
तपाईं फेडरल Valverde को आमा हुनुहुन्छ?.
वस्तुहरूको वर्तमान अवस्था: पछि, फेडेरिको पूर्ण रूपमा परिपक्व भएपछि, उनका आमाबुबाले मोन्टेभिडियोमा फर्कने प्रस्ताव गरे। उनीहरूले आफ्नो छोरालाई उनको भाई डिएगोसँगै म्याड्रिडको अनुभव जारी राख्न अनुमति दिए। आफ्नो मातृभूमि फर्किए पछि, फेडले आफ्ना बाबुआमाको लागि चार ओछ्यानको कोठा भएको। उनको बुबा र आमा आमा लेखेको समयमा हाल उरुग्वेमा छन् र उनीहरूको छोरालाई हरेक छ महिनामा भेट्न आउँदछन्।
फेडरिको भल्भर्डे भाइको बारेमा अधिक: फेडेरिको भाइको बारेमा धेरै कम थाहा छ जो डेइगो नामबाट जान्छ। सार्वजनिक ध्यान बेवास्ता गर्दा, यो डिएगो आफ्नो सानो भाइको क्यारियर हेरचाह बाहेक अरु केही काम गरेको हुन सक्छ।
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - जीवन शैली
फेडरिको भल्भर्डेको जीवनशैली चिन्नुले तपाईंलाई उसको जीवनस्तर बुझ्न सहयोग गर्दछ। जब यो पैसाको कुरा आउँछ, फेडेरिकोसँग खर्च र बचतको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिभा हुन्छ। उसको साप्ताहिक ज्याला उसको परिवारको हेरचाहमा प्रयोग गर्न पर्याप्त छ जबकि उसले राम्रो कार चलाउँदछ। तलको फोटोले उसको नम्र जीवनशैलीको सार दिन्छ।
फेडरिको भल्भर्डे कार- ऊ कसैको साथ चित्रण गरिएको छ जो डिएगो जस्तो देखिन्छ, उसको जेठो भाई। क्रेडिट: टम्बलर र ट्विटर
फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - अनियमित तथ्यहरू
उनले एक पटक आवाज र सासको समस्याबाट पीडित: 2016 सम्म, फेडेरिको भल्भर्डेसँग एक राम्रो क्यारियर थियो, जबसम्म ऊ सास फेर्न थाल्यो। यो पछि अस्वस्थताको कारण उसको आवाजमा अचानक परिवर्तन आयो र करीयरलाई नै धम्की दियो।
फेडेरिको भाल्भर्डे एक पटक आफ्नो फेफ र भ्वाईसको साथ एक मुद्दा थियो। क्रेडिट: क्लीभल्यान्डक्लिनिक, विकिपेडिया र एड्सम्याप
फेडेरिकोले ती चुनौतीपूर्ण क्षणहरू फोनिआट्रिक्स डाक्टरसँग बिताए (एक विशेषज्ञ जसले अध्ययन र अ organs्गहरूको व्यवहार गर्दछ, मुख्य रूपमा मुख, घाँटी, भोकल डोरी, र फोक्सो). केहि समयको छुट्टी पछि, भाग्यशाली फुटबलरले रियल म्याड्रिडको साथ आफ्नो क्यारियर जारी राख्न एक चमत्कारी पुन: मंचन गरे।
उसको बेबी क्लबले म्याड्रिडमा उनको स्थानान्तरणको लागि $ 11,300 प्राप्त गर्यो: यो युनियन क्लबका विद्यार्थीहरू, जहाँ फेडरिको बेबी क्यारियरमा शुरू भयो Real 11,300 रियल मैड्रिडमा उनको आरोहणको लागि बन्दोबस्तको रूपमा। तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो क्लबले आफ्नो इतिहासमा प्राप्त गरेको सब भन्दा महँगो स्थानान्तरण मोनि हो। पैसालाई क्लबको चुहावटको छत, ड्रेनेज पाइप, ग्रीस फिटिंग अन्य चीजहरूमा फिक्स गर्न प्रयोग गरियो।
उसको मात्र विवाद: फेडरिकोले आफ्नो क्यारियरमा हालसम्म एक विवाद मात्र हासिल गरेको छ (लेखनको समयमा)। मा 2017 फीफा U-20 विश्व कप पोर्चुगलको बिरुद्ध क्वार्टर फाइनल म्याच, उरुग्वेनले अनुहारको भाव प्रदर्शन गर्‍यो किनभने उसले आफ्नो औंलाले पेनल्टी अ after्गाए पछि उसको आँखा तर्काउन प्रयोग गर्‍यो। उसको कार्यलाई जातीवादी मानिन्थ्यो। विश्वभरि हजारौं फुटबल फ्यानहरूले यसलाई आलोचना गरे। फेडेरिकोलाई जब उनको कार्यको बारेमा सोधिन्, उनले भने कि त्यो उत्सव उसको साथी र एजेन्टको लागि हो जो यस नामबाट जान्छ "एल चिनो" साल्डाविया.
उहाँ एक पटक डिएगो माराडोना जस्तो पीडा महसुस गर्नुभयो: मे 19 को अपरान्ह, 1978 यसको इतिहास छ। त्यो वर्ष, अर्जेन्टिनाका पूर्व प्रशिक्षक César Luis Menotti छोडे डिएगो अर्मार्मो माराडोना (पुरानो 17) उनको विश्व कप चयनबाट। धेरै निराश डिएगो धेरै रोए र त्यो निराशाले उनलाई परिवर्तन गर्‍यो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… फेडरिकोले उस्तै दुर्भाग्य भोगे किनकि उसलाई उनको प्रशिक्षक मास्ट्रो तबरेजले एक्सएनयूएमएक्स विश्वकपको लागि ड्रप गरे। तपाईं थियो अर्जेन्टिना स्टार भन्दा दुई बर्ष मात्र जेठो थियो (1978)। उनले माराडोना अनुभवबाट सिके जसले उनलाई पनि बलवान बनायो। लेख्ने समयमा, फेडरल पूर्ण रूपमा3विश्व कप बाँकीको साथ राष्ट्रिय टीम टीमको हिस्सा। धन्यबाद, उहाँसँग एक राम्रो साप्ताहिक ज्याला, एक सभ्य वार्षिक तलब, र एक ठूलो हप्ताको 750 मिलियन यूरो छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फेडरिको वाल्भरडे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यांकहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
उरुग्वे फुटबल डायरी
जोसेस गिमिनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य